Wedding in the style of "Alice in Wonderland"
Ubudlelwane Wedding Izitayela Zomshado
Ukukhethwa okuphelele kokubamba umkhosi womshado wombhangqwana ovelele kuyoba umshado ngesitayela se "Alice in Wonderland". Akunzima ukuhlela umshado onjalo, futhi kuzoletha bonke abantu abakhona kulokho okukhanyayo futhi okungenakulibaleka. Izimemo zomshado
Okokuqala, udinga ukucabangela umklamo womshado, uqale ngokudala izimemo ezifanele futhi uphele ngokukhethwa kokuhlelwa kwehholo ledili. Izimemo emshadweni kulesi sitayela zingenziwa ngendlela yamakhadi amakhulu okudlala wezinti ezihlukene. Umbhalo wesimemo sokubhala ngosizo lwamagama afakiwe - kuzodingeka ufunde isimemo esinjalo kumvakashi usebenzisa isibuko.
Uma sikhuluma ngemoto yomshado, kungcono kakhulu ukuhlela ngezibambo eziqoqwe amaza, izinhliziyo futhi ngempela ama-roses - ezimhlophe nezibomvu. Ngokuvamile, isihloko se-roses kufanele silandelwe kulo lonke leli holide, ngoba lena yingxenye ejabulisayo nenhle kakhulu endabeni ka-Alice. Emgodini wemoto, futhi, kufanele kube yisikhumbuzo sendaba yomshado. Kungaba isithwabhaka esimhlophe esitokisini noma, isibonelo, i-cylinder ekhanyayo nge-pair of gloves.
Ukungena ekamelweni lapho idili lomshado kuzokwenzeka khona kungcono ukuhlobisa njengendlela yokungena emgodini wenogwaja noma umhubhe ongaziwa ohlaza. Futhi, umnyango ungaba umnyango ongavamile ophethe ukhiye oqoshiwe ohlangene nesibambo. Ehholo ledili, udinga ukubeka izinto eziningi ezahlukene ngangokunokwenzeka ngekhanda lomshado - izigqoko ezingaphandle, izilonda eziphilayo emgodini, amathrekhi akhanyayo, amaglavu, iwashi elineketini. Emdongeni ungafaka i-watch enkulu noma ewusizo wangempela ngesitayela sase-England ekhulwini le-19, ama-roses abamhlophe abomvu nababomvu, izithombe zezimoto zekhadi.
Ukudla namabhodlela kufanele kubhalwe ukuthi "Yidla!" Noma "Ngiphuze!". Futhi, idili lemikhosi liyoba yinto yokuqala, uma lihlotshaniswa njengeqembu letiye, uma lifiswa, lichithe iziphuzo ezihlukahlukene emabhodleleni. Etafuleni kufanele kube okukhanyayo, mhlawumbe okungcolile, izitsha kanye namaphilisi, isibonelo, esiteji. Eduze ipuleti ngayinye ungafaka amaphilisi amancane ngendlela yokudlala amakhadi ngamagama wezivakashi.
Ukugqoka umlobokazi kudingeka kutholakale amathoni amhlophe ne-blue. Lokhu kungaba yembatho yokugqoka yomshado, ehlotshiswe ngezakhi zendwangu eluhlaza okwesibhakabhaka noma igqoke isitayela saseVasternia nge-lace enesibindi. Kwabesifazane abathandekayo nabaqotho, izingubo ezimfushane, amagilavu ​​kanye ne-hat-cylinder ekhanyayo kufanelekile. Umkhwenyana ngaphezu kwezinto ezijwayelekile zokugqoka - i-suit-piece amathathu, ihembe elimhlophe noma elikhanyayo ne-butterfly, ungafaka futhi isilinda ngisho nezicathulo zembala ehlukahlukene.
Abazali bomakoti nomkhwenyana bahle kakhulu begqoke izingubo zobukhosi nemikhosi, njengamakhosi namakhosikazi emivimbo ehlukene. Izivakashi nazo zingagqoka izingubo ezikhanyayo emoyeni wezwe leziMangaliso ngokusetshenziswa kwazo zonke izigqoko, amaglavu, ama-wigs, izicathulo ezimibalabala nezinye izici. Phakathi kwezivakashi ngesikhathi esifanayo sokuba umbala kumele kube khona abantu ezigqoka ze-Cheshire Cat, March hare noHatter.
Ukuhola noma, isibonelo, ofakazi abazochitha kusihlwa, kufanele babe nezingubo zezinhlamvu eziyinhloko zezinganekwane, okungukuthi i-White Rabbit no-Alice ngokwabo. Phakathi nalesi senzakalo, i-White Rabbit inesibopho sokuhlala ilahlekelwa igilavu ​​yakhe ezindaweni ezingalindelekile, futhi u-Alice nezivakashi - ukumsiza ukuthi azithole. Futhi umvundla kumele ube nesilindi se-pocket futhi ngezikhathi ezithile kubo ngokubheka ukukhathazeka. U-Alice ngezinye izikhathi angafaneleki ukukhuluma amavesi, enze izifumbathiso futhi ngokujwayelekile zonke izinhlobo zezinkolelo ezizosiza noma yiziphi izivakashi.
Lapho ungena ehholo ungakwazi ukufaka isithombe sesikhulu esikhulu se-Cheshire, esibhekene naso lapho isivakashi ngasinye sizodinga ukumomotheka nge-blindfold. Lesi sihambeli esivela ngaphezulu, sithola indondo ngesithombe sekati.
Kusukela emincintiswaneni kungenzeka ukuba uqhube umncintiswano we-classical "umdanso ephephandabeni", yibiza nje ngokuthi "i-Sea Quadrille" futhi ucabange ukuthi leli phephandaba liyingxenye yolwandle, okuyinto, njengoba amagagasi ekhula, iba kancane kancane.
Ngaphezu kwalokho, kuyoba nomncintiswano othakazelisayo lapho izivakashi zizohambela imibala ye-roses ezimhlophe ezibunjiwe kusukela enhlama noma eziqoshwe ephepheni zibe zibomvu. Lo mncintiswano ungahle uhlelwe ngendlela yohlanga oluthile.
Empeleni kuyoba ngumdlalo ku-isibungu, lapho isixhumanisi sokuqala sifika kwisimenywa esikhethwe nguye futhi simema ukuba abe umsila wakhe. Isivakashi esikhethiwe asiqapheli ukwenqaba futhi sikwazisa ngalesi sihloko. Ngaphezu kwalokho, umsila uhamba ngaphansi kwezinyawo zekhanda futhi uba endaweni yawo ngemuva kwawo. Futhi-ke, njengoba ikhula, kuze kube yilapho zonke izivakashi ziyingxenye yombungu. Umnikelo nomsila wesibungu kufanele uzwakale njengemishwana ethile elungiselelwe ngaphambili ukuze bakwazi ukuphindaphinda ku-chorus.
Futhi-ke, ungakwazi ukuhlela i-croquet yasebukhosini, lapho izivakashi zizokwenza, njengokuzikhethela, zivule amabhaluni ngezambulela ngaphansi kwesitulo ngokufaka amazwana aphikisayo eholayo. Kunemizwa eminingi emihle futhi emihle iyohlinzekwa wonke umuntu!
Umshado ngesitayela sesiNgisi
Wedding in the style rock
Wedding in the style shebbie-chic: charm of zakudala
Wedding in the style of retro
Wedding in style Greek
I-Pissaladier, i-provencal pie pie
I-Broccoli iklabishi isaladi
I-Rolls nge isipinashi
Sipheka ama-pancake oatmeal, zokupheka ngesithombe semikhiqizo elula ewusizo ekhaya
Amapheya amasha nama-shrimps okugcobe
I-meat zrazy ngamakhowe kanye ne-broccoli
Ukuphumula okusebenzayo = umzimba omuhle
Izinganekwane mayelana nokubamba ingane
Yeka ukuthi izingane ezincane ziphethwe kanjani ngamagciwane epolio
Amaqhinga wesifazane, usuku lokuqala
Amazambane othosiwe ne-parmesan ushizi
Inhlanganisela efanele yembala ngaphakathi
Amehlo ahle kuyisiqinisekiso sempilo
Ungaqala kanjani ubuhlobo obusha ngemva kwesahlukaniso
I-Hake fillet ebhakawe ngemifino
Indlela yokuhlala phezu kwe-twine kusukela ekuqaleni: abavocavoti bayeluleka